Carruur isbitaalka Beledweyne u jiifta shuban-biyood
Carruur isbitaalka Beledweyne u jiifta shuban-biyood
Photo | Maryan Muxumed oo isbitaalka Beledweyne kula jirta wiilkeeda/Jamaal/Ergo
Radio Ergo 05 February, 2016 BALEDWEYNE
(ERGO) - Jawaahir Saney Xuseen waxay isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne kula jirtaa wiilkeeda oo jira 20 bilood oo labadii Febaraayo uu soo ritay shuban-biyood. Waxay ka mid tahay dadka ku nool xerada lagu soo barakacay ee Khadiijo Khudaarrey ee magaalada Beledweyne.
Jawaahir wiilkeeda wuxuu ka mid yahay 23 carruur ah oo hadda isbitaalka lagu daweynayo, kuwaas oo laga kala keenay xaafadaha Beledweyne iyo qaar ka tirsan tuulooyinka hoos taga magaalada. Waxay sheegtay inay cunuggeeda toddobaadkan gudihiisa ku aragtay qandho iyo shuban. “Hadda waxaa la siiyaa dawooyin, wuuna soo roonaanayaa,” ayay tiri.
Agaasimaha guud ee isbitaalka Beledweyne Axmed Maxamed Khaliif ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in isbitaalka oo ay taageerto hay`ad maxalli ah oo lagu magacaabo Wardi uu adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah siiyo carruurta uu soo ritay shuban-biyoodka. “Carruurta ugu badan ee uu soo ritay waxay da`dooda ka yar tahay shan sano. Kuwa ay xaaladdooda liidato waan seexinnaa, si aan ugu fidinno daryeelka caafimaad ee ay u baahan yihiin.” Wuxuu intaa ku daray in ay waalidka siiyaan talooyin ku aaddan sida ay cudurka uga hortegi karaan.
Maryan Muxumed waxay tuulada Macaan Qaalle oo 20 km dhinaca galbeed ka xigta Beledweyne ka keentay wiilkeeda oo jira labo sano iyo toban bil. Tuulada oo aan lahayn xarun caafimaad darteed ayay wiilkeeda oo uu soo ritay shubanka usoo qaadday isbitaalka oo muddo toddobaad ah lagu daweynayo.
Agaasimaha ayaa tilmaamay in lagu jiro xilli kuleyle ah oo ceelashu ay biyo yareeyeen, dadkuna ay isticmaalaan biyaha webiga oo nadaafad ahaan aan wanaagsaneyn. Wuxuu sheegay inuu shuban-biyoodka u baahan yahay taxadar dheeraad ah, isagoo bulshada kula taliyay inay ku dadaalaan nadaafadda biyaha iyo cuntooyinka, haddii carruurtooda ay xanuun ku arkaanna ay geeyaan xarumaha caafimaadka.
Ilaa 87 carruur ah oo uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka ayaa tan iyo bartamihii bishii Jannaayo la geeyay isbitaalka guud ee Beledweyne. Carruurtaas intooda badan waa la daweeyay waxaana dib loogu celiyay guryahooda.
(Jamaal Cali Cabdi/AT)